Vapepeti veNhau muAfrica Voshanyira Zimbabwe
Va Foster Dongozi
HARARE — Masachigaro emasangano evapepeti venhau muAfrica ari muZimbabwe kuzosimbisa hukama nesangano ravapepeti venhau vemuno reZimbabwe National Editors Forum pamwe nekuona gadziriro dzemusangano weUnited Nations World Tourism Organisation General Assembly uyo uchaitirwa kuVictoria Falls muZimbabwe nekuLivingtone kuZambia gore rino.
Sachigaro weZimbabwe National Editors Forum, VaBrian Mangwende, vaudza Studio7 kuti vakaronga rwendo rwemasachigaro aya rwemazuva maviri kuti azodzidza nezviri kuitika munyika pamwe nematambudzika akatarisana nevatori venhau pamwe nemakambani avanoshandira munyika.
VaMangwende vanoti apo vachange vari munyika, vapepeti ava vachasangana nemasangano anoshanda nevavatori venhau akaita seZimbabwe Union of Journalists, Media Instutute of Southern Africa-Zimbabwe chapter, Voluntary Media Council of Zimbabwe nemamwe vachizeya mashandiro pamwe nezvinonetsa vatapi venhau muZimbabwe.
Vanotarisirwawo kushanya mumapepanhau ese nedzinhepfenyuro dzese pamwe nekusangana nemakurukota ehurumende ane chitsama.
VaMangwende vanoti zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka panyaya dzekutora nekuburitswa kwenhau sezvo pachine mitemo inombunyikidza vatapi venhau.
Vapepeti vauya vanosanganisira Mondi Mamakhanya veSouth Africa Editors Forum, VaJovial Rantao veSouthern Africa Editors Forum, anoona nezvekufambiswa kwemabasa muAfrican Editors Forum, Moumina Cheriff Sy wekuBurkina Faso, vanoona nezvekufambiswa kwebasa muSouthern African Editors Forum, Elizabeth Kalambo Mule wekuNambia naMpho Dibeela wekuBotswana.
Mumashoko avo ekupera kwegore rapera, munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists, VaFoster Dongozi, vakati sangano ravo harisi kufara nekuti vatapi venhau vari kuramba vachishungurudzwa nemapurisa pamwe nevezvematongerwo enyika.
VaDongozi vanoti sangano ravo rinotarisira kuti gore rino richange rakaoma nekuda kwesarudzo dziri kutarisirwa kuitwa.
Zimbabwe ndeimwe yenyika dzinozivikanwa nekumbunyikidza vatori venhau pasi rese uye kunyange hazvo hurumende yemubatanidzwa yainge yazvipira kubvisa kana kuvandudza mitemo yemashandiro evatori venhau, haisati yaita izvi.